Asus ZenFone 6 wuxuu helaa cusbooneysiin ku saabsan taageerada ARCore iyo inbadan | Androidsis
Asus ZenFone 6 wuxuu helaa cusbooneysiin cusub oo leh taageerada ARCore iyo inbadan
El Asus Zenfone 6 waxaa la bilaabay bartamihii bishii Meey. Tan iyo markii ay timid suuqa, waxay uga tagtay adeegsadayaasheeda dhadhan fiican iyada oo ay ugu wacan tahay qeexitaankeeda farsamo ee wanaagsan iyo astaamaha waxqabadka sare. Aynu tixgelinno inay tahay terminaal leh kan Snapdragon 855; Kaliya tan, waxaan ka qiyaasi karnaa wax badan oo ku saabsan awoodeeda.
Soo-saaruhu wuxuu ugu deeqay sida ugu fiican uguna fiican ee ka soo-bax. Si kastaba ha noqotee, hal shay oo ka maqnaa ayaa ah taageerada ARCore. Si loo xaliyo yaraantaan, a cusbooneysiin cusub, oo ah tan aan ka hadlayno tan xigta, ayaa fulisa tan, iyo sidoo kale wararka kale iyo isbadalada yar yar.
Miisaanka cusbooneysiinta waa 396.8 MB. Tan si tartiib tartiib ah ayaa loo soo saarayaa, maadaama shirkadaha loo isticmaalay inay ku faafiyaan xirmooyinka qalabka cusub. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee cusbooneysiinta ayaa ah kuwii ugu dambeeyay (ee hadda ah) xirmooyinka amniga ee Android, iyo sidoo kale hagaajinta kamaradda qalabka, oo ku dhisan shaqada wanaagsan ee cusboonaysiinta hore. Cusbooneysiinta ayaa sidoo kale ku dareysa taageerada rasmiga ah ee Google ARCore, inta in badan la sugayay oo la soo sheegay kooxda XDA-Horumarinta.
Cusbooneysiinta "v16.1210.1906.156" ee Asus ZenFone 6 now ayaa hadda la socota isbedelada soo socda:
ARCore waa la awoodsiiyay.
Khibrad wicitaan fiidiyoow ah.
Daarnaatay 8X in lagu sawiro qaabka sawirka.
Waxaa laga saaray waqtiga xaddidan duubista fiidiyowga FHD.
Hawl lagu daray si loo bilaabo / loo joojiyo duubista fiidiyowga oo leh furayaasha mugga ee barnaamijka kamaradda.
Tayada sawirada sawirada la hagaajiyay ee yareynta buuqa.
Degganaansho la hagaajiyay si loo rogo kaameradda.
Degganaanshaha shaashadda la hagaajiyay iyo cillad go'an oo la xiriirta shaqeynta shaashada.
Awoodsiisay TaiwanMobile VoWi-Fi.
Baro amniga ayaa la cusbooneysiiyay Juun 2019.
Xadhig turjumaadaha xarfaha.
Ugu dambeyntiina, waxaan kugula talineynaa in taleefanka casriga ahi ku xirnaado shabakad Wi-Fi xasiloon oo xawaare sare leh ka hor inta aanad bilaabin soo dejinta iyo habka rakibidda ee xirmada, iyo sidoo kale heer batrool oo wanaagsan, si looga fogaado isticmaalka xirmada xogta aan loo baahnayn iyo xad-dhaafka ah. la heli karo iyo wixii cillad ah ee ka dhalan kara.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Asus ZenFone 6 wuxuu helaa cusbooneysiin cusub oo leh taageerada ARCore iyo inbadan
Honor 9X wuxuu horey u lahaa taariikh soo bandhigid
Ogosto 7, Galaxy Note 10 ayaa la soo bandhigayaa